Diyaarado Kusoo Degay Saldhiga Deegaanka Cali-fooldheere. – Bogga Calamada.com
Diyaarado Kusoo Degay Saldhiga Deegaanka Cali-fooldheere.
Iyadoo habeenkii xalay deegaanka Cali Fooldheere ee duleedka degmada Mahadaay ee gobalka Shabeelada dhexe uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Shabaabul Mujaahidiin iyo kuwa gaalada Burundi ayaa waxaa isasoo taraya faahfaahinada laga helayo dagaalkaasi.
Intii dagaalka uu socday waxey ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Garneelada garbaha laga tuura ku garaaceen saldhiga ciidamada Burundi ee deegaanka taasi oo sababtay in dab xoogan uu ka kaco saldhiga,sidoo kale warar hoose waxey sheegayaan in dagaalkaasi dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen tiro askar Burundeys ah.
Saaka aroortii waxaa saldhiga deegaanka Ciidamada Burundi ee deegaanka Cali Fooldhere soo caga dhigtay Labo diyaaradood oo ah noocyada Elecobtarka kuwaasi oo goobta ka qaaday askartii Burundeyska ee baqtiga iyo dhaawaca ku noqday dagaalkii xooganaay ee habeenkii xalay ka dhacay deegaankaasi.
Gobalka Shabeelada dhexe waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay weeraro ay fuliyeen ciidaamda Shabaabul Mujaahidiin weeraradaasi oo lagu dilay askar isugu jirta maleeshiyaatka dowlada Ridada iyo kuwa Shisheeyaha soo duulay.